Ukhetho lweModeli-I-AOOD Technology limited
Yintoni iringi yesiliphu?
Iringi yeringi sisixhobo se-elektroniki esidityaniswa neebrashi ezivumela ukuhanjiswa kwamandla kunye neempawu zombane ukusuka kwindawo emileyo ukuya kulwakhiwo olujikelezayo. Ikwabizwa ngokuba lilungu lombane elijikelezayo, umqokeleli okanye ukujikajika kombane, iringi yesiliphu inokusetyenziswa kuyo nayiphi na inkqubo ye-elektroniki efuna ukujikeleza okungathintelwanga, okuphakathi okanye okuqhubekayo ngelixa uhambisa amandla, i-analog, idigital, okanye imiqondiso ye-RF kunye / okanye idatha. Inokuphucula ukusebenza ngoomatshini, yenze lula inkqubo yokusebenza kunye nokuphelisa iingcingo ezonakalisayo ezijinga kumalungu ahambisekayo.
Ngelixa eyona njongo iphambili yesiliphu sokuhambisa kukuhambisa amandla kunye neempawu zombane, ubukhulu bomzimba, indawo yokusebenza, isantya esijikelezayo kunye nezithintelo zoqoqosho zihlala zichaphazela uhlobo lokupakisha ekufuneka lusetyenzisiwe.
Izinto ezifunwa ngumthengi kunye neenjongo zexabiso zizinto ezibaluleke kakhulu ekuqhubeni izigqibo ezikhokelela kuphuhliso loyilo lwesiliphu esiphumeleleyo. Izinto ezine eziphambili zezi:
■ iinkcukacha zombane
■ ukupakisha ngoomatshini
■ indawo yokusebenza
Amakhonkco esiliphu asetyenziselwa ukuhambisa amandla, ii-analog, imiqondiso ye-RF kunye nedatha ngeyunithi ejikelezayo. Inani leesekethe, iintlobo zemiqondiso, kunye neemfuno zokuzikhusela kwingxolo yombane yenkqubo zidlala indima ebalulekileyo ekumiseleni izithintelo zoyilo lomzimba ezibekwe kuyilo lwesiliphu sesiliphu. Imijikelezo yamandla aphezulu, umzekelo, ifuna iindlela ezinkulu zokuhamba kunye nesithuba esikhulu phakathi kweendlela ukonyusa amandla ombane. Imijikelezo ye-Analog kunye nedatha, ngelixa lixinene ngokwasemzimbeni kunesekethe yamandla, ikwafuna ukhathalelo kuyilo lwayo ukunciphisa iimpembelelo zokuthetha okanye ukuphazamiseka phakathi kweendlela zomqondiso. Kwisantya esisezantsi, usetyenziso lwangoku olusezantsi lunokuqeshwa ngebrashi yegolide / ngegolide / inkqubo yoqhakamshelwano lweringi. Olu dibana luvelisa ezona ndlela zincinci zokupakisha njengoko kubonisiwe kwi-AOOD compact capsule slip rings. Kwisantya esiphezulu kunye neemfuno zangoku ukudityaniswa kweebrashi zegrafayithi zesilivere kunye neeringi zesilivere zisetyenzisiwe. Ezi ndibano zihlala zifuna ubungakanani beephakeji ezinkulu kwaye ziboniswa phantsi kwamakhonkco esiliphu. Sebenzisa nokuba yeyiphi na indlela uninzi lweesetyhula zesekethe ezibonisa utshintsho kutshintsho olunamandla lokudibana malunga ne-10 milliohms.
Ukuqwalaselwa kokupakishwa kuyilo lwesiliphu esliphu kuhlala kungangqinanga njengemfuno zombane. Uninzi lwezinto ezityibilikisayo zokwenza isangqa zifuna ukufakwa kwikhabhathi kunye nofakelo lweshafti okanye imithombo yeendaba ukudlula kwisazinge. Ezi mfuno zihlala zichaza ubungakanani beyunithi yangaphakathi. I-AOOD inikezela ngeendlela ezahlukeneyo zokubhabha iindibano zeringi yesiliphu. Olunye uyilo ludinga iringi yesiliphu ukuba ibe ncinci kakhulu ukusuka kwindawo yokuma yedayimitha, okanye ukusuka kwindawo yokuma. Kwezinye iimeko, indawo efumanekayo yesiliphu esityibilikiselweyo, efuna ukuba izinto zokwenza isiliphu zibonelelwe ngokwahlukeneyo, okanye ukuba iringi yesiliphu idityaniswe nemoto, isivamvo sokuma, ifayibha yokujikeleza ngokudibeneyo okanye irotary ejikelezayo yeRF kwiphakheji ehlanganisiweyo. . Ngokusekwe kubuchwephesha betyhubhu yesiliphu esiphucukileyo, i-AOOD yenza ukuba zonke ezi mfuno zintsonkothileyo zifezekiswe kwinkqubo enye yesiliphu esityibilikayo.
Indawo esingqongileyo ekufuneka isiliphu isebenze phantsi kwayo inefuthe kuyilo lwesiliphu ngeendlela ezininzi. Isantya sokujikeleza, ubushushu, uxinzelelo, ukufuma, ukothuka kunye nokungcangcazela kunye nokuchaphazeleka kwizinto ezinokubangela ifuthe ekukhetheni izinto, ukhetho lwangaphandle lwezinto, ii-flange mounts kunye nokukhetha iikhabhathi. Njengokuziqhelanisa nomgangatho, i-AOOD isebenzisa izindlu ezilula zealuminium kwisangqa sayo esineesiliphu. Indlu engenazintsimbi inzima, kodwa iyafuneka elwandle, phantsi kwamanzi, inokubola kunye nenye imeko-bume engqongqo.
Uyichaza njani iSlip Ring
Iiringi zokutyibilika zihlala ziyinxalenye yendlela enkulu enesidingo sokudlulisa amandla ombane athile kunye neesekethe zomqondiso kwindawo ejikelezayo. Oomatshini iringi yesiliphu yinxalenye yokusebenza kwindawo enje ngeenqwelo moya okanye inkqubo ye-eriyali yeredar. Ke ngoko, ukuyila uyilo lwesiliphu esiza kuphumelela ekusetyenzisweni kwalo, iikhrayitheriya ezintathu kufuneka zaneliswe:
1. Ubungakanani bomzimba, kubandakanya ulungelelwaniso lokuncamathisela kunye neempawu zokujikeleza
2. Inkcazo yemijikelezo efunekayo, kubandakanya ubuninzi obukhoyo ngoku kunye nevolthi
Indawo yokusebenza, kubandakanya ubushushu, ukufuma, iimfuno zenkungu yetyuwa, ukothuka, ukungcangcazela
Iinkcukacha ezithe kratya zomsesane wesiliphu zibandakanya:
■ Ukuxhathisa okuphezulu phakathi kweRotor kunye neStator
■ Ukuzahlula phakathi kweesekethe
■ Ukuzahlulwa kwimithombo ye-EMI ngaphandle kwezindlu zesiliphu
■ Ukuqala nokusebenza kwetorque
■ Iinkcazo zesekethe yedatha
Iimpawu ezongezelelekileyo eziqhelekileyo ezinokufakwa kwindibano yesilayidi ebandakanya isiliphu zibandakanya:
■ Imibutho yabasebenzi ejikelezayo
■ Amalungu e-fiber optic rotary
I-AOOD iya kukunceda ukuba uchaze isiliphu sakho esifunekayo kwaye ukhethe imodeli efanelekileyo yeemfuno zakho zoyilo.